Usoro mkpochapụ/ihichapụ data COVID-19 tụrụ aro ka ọ ga-emerụ ahụ karịa enyemaka, akụkọ PERC chọpụtara.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Usoro mkpochapụ/ihichapụ data COVID-19 tụrụ aro ka ọ ga-emerụ ahụ karịa enyemaka, akụkọ PERC chọpụtara.
Akuko ohuru nke Policy & Economic Research Council (PERC) weputara chọpụtara na usoro mgbochi/nhichapụ data chọrọ iji lebara ndahie akụ na ụba nke COVID-19 ga-ebelata ohere ịnweta kredit ma ọ bụrụ na etinyere ya. Nkwupụta ahụ, nke akpọrọ "Mmetụta sitere na Mwepu Sistemu nke data mkparị na mkpesa kredit," gosipụtara mmetụta nke mkpochapụ buru ibu na nhichapụ ozi kredit na-adịghị mma.
N'ime ọnwa iri na asatọ gara aga, ndị na -eme iwu na United States na ụwa niile na -agbasi mgba ike nke mkpọchi ahịa site na usoro nlekọta ahụike dị mkpa. N'ime ụlọ, nzaghachi mkpesa kredit dị warara na nke ezubere iche sitere na Iwu CARES yiri ka ọ gara nke ọma. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị otu Congress kpọrọ oku maka mmachibido iwu zuru ụwa ọnụ na mkpesa kredit nke ozi ọjọọ, na-ekpuchi ndị niile na-azụ ahịa n'oge (yana oge ụfọdụ mgbe) nsogbu COVID-18-amụma akpọrọ '' nkwụsị na nhichapụ. . ”
Ọ bụ ezie na ọrịa na -efe efe na -aga n'ụzọ ziri ezi na US, obodo ahụ esighi n'ọhịa pụta. Ebe 22% nke ndị bi na United States enweghị ọgwụ mgbochi, yana ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị ala n'ụwa niile, enwere ohere dị ukwuu maka nsogbu ahụike ịga n'akụkụ. Ọ bụrụ na nke a emee, enwere ike ịnwa ndị omebe iwu ka ha wepụta usoro mmechi/nhichapụ iji chebe ndị ahịa. Ọzọkwa, ewebatala ngwa ndị dị warara nke ụzọ a na Congress dị ka mmezi nke Iwu ikike nchekwa mba (NDAA). Ọ bụ ezie na ebumnobi nke ọma, dị ka nke sara mbara, ngwa ndị dị warara nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ndị na-agbazinye ego karịa inye aka-na nke a ndị ọrụ agha na-arụsi ọrụ ike.
Nkwupụta PERC chọpụtara na site n'iji amụma mmechi/nhichapụ ka ukwuu, ọnụ ọgụgụ kredit na-ebili-mana ezughị iji kwekọọ ịrị elu n'otu oge na akara mbepụ nke ndị na-agbazinye ego na-ekpebi ndị mbinye ego ga-ajụ na nke ha ga-anabata. Dịka ọmụmaatụ, mgbe naanị ọnwa isii nke iwepụ/nhichapụ, akara mbepụ na-arị elu ruo 699 ebe akara nzere kredit na-abawanye naanị 693. Oghere dị n'etiti abụọ ahụ na-agbasawanye ka oge na-aga, nke pụtara na ogologo iwu nke mmegbu dị, ka ọtụtụ ndị mmadụ ga -agọnarị ịnweta kredit nkịtị.
Ihe akaebe sitere n'ọmụmụ ihe ọhụrụ ahụ gosikwara na ndị na-agbazinye ego na-eto eto, ndị na-agbazinye ego obere ego, na ndị na-agbazinye ego sitere na mpaghara pere mpe ga-enweta mmetụta ọjọọ kacha njọ. N'otu ihe atụ, ka nnabata kredit maka ọnụ ọgụgụ mmadụ niile belatara 18%, ọ dara 46% maka ndị na -agbazinye ego kacha nta. Ọnọdụ ọzọ, gụnyere mmetụta mbibi omume site na amụma mmechi/nhichapụ, hụrụ ohere kredit maka ndị gbara afọ 18 ruo 24 belata site na 90%dị ịtụnanya. Mmetụta zuru ebe niile na otu ọgbọ nwere ike nwee mmetụta na-adịgide adịgide n'ikike ha nwere imepụta akụ na ụba na ịba akụ-ama ama dị ka Millennials gbalịsiri ike n'ihu a metụtara Gen-Xers na Boomers n'otu afọ. Site na ego, ọ dara 19% maka ndị otu na -akpata obere ego mana 15% maka nke kachasị elu - ọdịiche 27%. Maka ndị ezinaụlọ nọ na mpaghara ọcha, ndị na-abụghị ndị Hispanik, ọ dara 17%, mana na mpaghara ndị ojii, ọ dara 23%, na mpaghara ndị Hispanic ka ukwuu, ọ dara 25%.
Nchọpụta PERC fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ lekwasịrị anya n'iji data eme ihe nke ọma iji gbasaa itinye ego. Ọmụmụ ihe a bụ n'ihu akwụkwọ akụkọ gara aga akpọrọ "Mgbakwunye dị mma karịa Mwepu: Ihe egwu dị na mwepu data na uru dị n'ịgbakwunye data dị mma na mkpesa kredit." Ọ tụlere nyocha gara aga na nhichapụ data wee gosipụta nchọpụta na -agbanwe agbanwe na nhichapụ data na -emerụ ndị na -agbazinye ego. N'adịghị ka iwepụ/nhichapụ, nyocha PERC achọpụtala na ịgbakwunye data ịkwụ ụgwọ na-abụghị ego na mkpesa kredit ndị ahịa na-abawanye ohere kredit nke ukwuu maka enweghị ike ịhụ kredit (ọkachasị ndị obere ego, ndị ntorobịa na ndị okenye America, obodo pere mpe na ndị kwabatara).
Akụkọ ahụ tụrụ aro ka agbakwunye data ịkwụ ụgwọ dị mma (n'oge) nke telecoms, eriri na TV satịlaịtị, na ụlọ ọrụ brọdband n'ime sistemụ mkpesa kredit, kama ihichapụ data ịkwụ ụgwọ adịghị mma (mbubreyo). Nsonye data ịkọ amụma site na ọwa ndị ahịa nyere ikike nwekwara ike inye aka belata mbibi data faịlụ kredit ọdịnala sitere na ọrịa ọjọọ.
Onye isi oche PERC na onye isi oche Dr. Michael Turner kwuru, “Ndị na -eme iwu na United States enwetala nguzozi siri ike na ndokwa Iwu CARES - nke rụgoro ọrụ. N'ịga n'ihu, agbanyeghị, ọmụmụ anyị na -egosi na ha ga -akpachapụ anya zọchaa ụkwụ. ” Dr. Turner rụtụrụ aka na ọ ga-ekwe omume na ndị mmadụ wepụrụ n'ihi nsonaazụ/nhichapụ ga-agakwuru ndị na-agbazinye ego dị oke ọnụ (ụlọ ahịa pawn, ndị na-agbazinye ụbọchị ịkwụ ụgwọ, ndị na-agbazinye aha) iji gboo mkpa kredit ha n'ezie. Turner kwukwara, "Anyị chere na ọ bụ oge maka Congress ime ihe iji kwalite itinye data ọzọ na akụkọ kredit ndị ahịa."
Onye guzobere Society for Financial Education & Professional Development (SFE & PD) na Onye isi oche Ted Daniels gbakwụnyere, "Akuko PERC na mkpesa kredit nwere ozi bara uru nke ukwuu n'ihi na ọ na-akọwa etu atụmatụ imechi/nhichapụ data COVID-19 siri belata ohere ịnweta kredit maka ndị na-azụ ahịa, ọkachasị. onu ogugu ndi mmadu. Ọzọkwa, akụkọ PERC na -egosi mkpa ọ dị maka mkpughe ziri ezi na nke ziri ezi nke data kredit niile - dị ka data ịkwụ ụgwọ dị mma nke telecom, eriri na TV satịlaịtị, na brọdband - n'ime akụkọ kredit. ”